1. Daakye bɛn na wohwɛ kwan sɛ wubenya, na dɛn ntia?
DƐN na ɛwɔ hɔ ma wo daakye sɛ nnipa ɔpepepem pii a wɔte okyinnsoromma a ɛne Asase so mprempren no mu biako? Wobɛpɛ sɛ ɛyɛ asetra a asomdwoe ne ahobammɔ wom, wɔ nnipa a wɔdodɔ wɔn ho ampa mu anaa? Wubetumi anya ɛno ne pii a ɛsen saa. Nanso ɛnyɛ ɛno ne daakye a nnipa dodow no ara hwɛ kwan. Dɛn ntia?
2, 3. Ɔkwan bɛn so na nuklea akodi ho hu anya sɛnea nkurɔfo hu daakye no so nkɛntɛnso?
2 Nuklea akodi ho asiane ama adwenem naayɛ a anibere wom asɔre sɛ ebia daakye bi wɔ hɔ ma adesamma abusua no mu fã kɛse koraa anaa. Bere a edi kan a wɔde atom ɔtopae dii dwuma wɔ akodi mu wɔ 1945 mu no, mmarima, mmea ne mmofra bɛboro 70,000 na wowuwui amonom hɔ ara. Nnipa mpempem pii nso wuu owu yayaw wɔ nna ne mfe bi a edii akyiri bae no mu. Nanso nnɛyi nuklea akode biako mu ɔtopae ahoɔden bɛyɛ sɛ atopae a wɔde dii dwuma wɔ Wiase Ko II mu nyinaa a wɔaka abom. Wɔasiesie nuklea akode ɔpedudu pii a wobetumi de adi dwuma ntɛm ara. Wiase no da so ara sɛe sika bɛyɛ dɔla $2,000,000,000 da biara wɔ akode ho akansi bi a ɛma nnipa ho dwiriw wɔn ho.
3 Na sɛ “nuklea ɔko ketewa” bi pɛ si nso ɛ? Nea ebefi mu aba no bɛyɛ hu ara. Sɛnea Carl Sagan a ɔyɛ nyansahufo bi a wagye din kae no, sɛ amanaman no de nuklea akode a wɔwɔ no kakraa bi mpo di dwuma a, “akyinnye biara nni ho sɛ yɛn asase nyinaa so anibuei no bɛsɛe. . . . Na ɛte sɛ nea ebetumi aba ankasa sɛ adesamma abusua no ase bɛtɔre.” Nnipa pii bɔ mmɔden sɛ wobeyi akwanhwɛ a ɛte sɛɛ afi wɔn adwenem, nanso ɛno mma asiane no mfi hɔ. Afoforo bi a wɔredɔɔso ntɛmntɛm atew wɔn a wobefi mu aka akuw horow. Esiane anidaso a wɔwɔ sɛ ebinom befi mu aka nti, wɔasisi hintabea ahorow wɔ mmeae a atew ne ho na wɔde nnuan ne nnuru, ne afei atuo a wɔde bɛpam nnipa a wɔnhwehwɛ wɔn hɔ no asie hɔ.
4. Dɛn nti na wobu sɛnea wɔsɛe nneɛma a atwa yɛn ho ahyia no sɛ asiane a anibere wom?
4 Nuklea akode akyi no, nyansahufo bɔ kɔkɔ sɛ sɛnea wɔde nneɛma a atwa yɛn ho ahyia no di dwuma ɔkwammɔne so no betumi de ɔhaw kɛse aba asase so nyinaa. Mframa a yɛhome a wɔresɛe no yɛ ade a ɛhaw adwene yiye. Wɔresɛe kwae ahorow wɔ ɔkwan a ɛyɛ ahodwiriw so; nanso eyinom ho hia na wɔakora kyinhyia a asase so mframa pa a wɔfrɛ no oxygen ne osutɔ di ne asase ani dɔte so. Esiane ɛho nimdeɛ a wonni ne adifudepɛ nti, wɔresɛe nsase a ɛma nnɔbae a ɛho hia no. Wɔresɛe nsu a ɛwɔ hɔ no, na awuduru na wɔtaa de yɛ saa. Nanso nneɛma yi ho hia na ama nnipa akɔ so atra ase.
5, 6. Tebea afoforo bɛn na ɛmma nkurɔfo nhwɛ kwan sɛ asetra betumi ayɛ nea ahobammɔ ne anigye wom?
5 Ebia wote nka sɛ w’ahiasɛm a ɛsen biara ne nokwasɛm a ɛne sɛ amumɔyɛ ama nkurɔfo reyɛ nneduafo wɔ wɔn ankasa afie mu. Amammui ne asetra mu basabasayɛ ma asetra yɛ nea asiane wom. Nnipa pii a wonnya adwuma nyɛ ne nneɛma bo a ɛkɔ soro no de ohia ne abasamtu ba. Ahotɔ nni nnipa pii fie asetra mu koraa; mpɛn pii no, ɔdɔ hama a ɛsɛ sɛ ɛka abusua no bom no nni hɔ. Su a nnipa kura wɔ baabiara ne “Me kan!”
6 Ɛnde, ɛhe na obi betumi anya biribi pa a obegyina so ahwɛ kwan sɛ obenya asetra a ahobammɔ wom? Sɛ́ asase sotefo no, sɛ yɛn daakye gyina nea nnipa ne aman a wɔde ɔhaw ahorow yi aba pɛ sɛ wɔyɛ ne nea wotumi yɛ nkutoo so a, nokwarem no, anka ɛbɛyɛ awerɛhow. Nanso ɛte saa?
NOKWASƐM AHOROW A ƐNSƐ SƐ WOBU ANI GU SO
7. (a) Adanse bɛn na ɛkyerɛ sɛ Bible no yɛ Onyankopɔn Asɛm? (b) Dɛn nti na ɛho hia sɛ nnipa behu nea Bible no ka?
7 Nnipa ntaa mmu asase ne adesamma Bɔfo no ho akontaa wɔ wɔn akontaabu ahorow mu. Nanso yɛbɛyɛ dɛn ahu nea ɛyɛ N’atirimpɔw? Bible no ka kyerɛ yɛn. Nhoma yi ka mpɛn pii sɛ emu nsɛm fi soro, efi Onyankopɔn nkyɛn. Eyi yɛ nokware? Sɛ ɛte saa a, ɛnde wo nkwa gyina sɛnea wobɛyɛ ade ma ɛne no ahyia no so. Esiane sɛnea asɛm yi yɛ asɛnhia nti, yɛhyɛ wo nkuran sɛ w’ankasa yɛ Bible no mu nhwehwɛmu. Wubehu sɛ emu nkɔmhyɛ pii a ɛda daakye ho nimdeɛ adi pefee no da nsow yiye. Nyansa a ɛde ka nsɛm a ɛho hia ma woanya anigye a ɛtra hɔ daa ho asɛm no yɛ nea ebiara ne no nsɛ. Yɛwɔ ahotoso sɛ, sɛ wode adwempa susuw adanse no ho a, wubehu sɛ Bible no ntumi mfi obiara hɔ sɛobi a ɔkorɔn kyɛn nnipa, Onyankopɔn bi a ɔdɔ adesamma ampa nkutoo nkyɛn. * Bible no kura nsɛm a ɛho hia ma nkwagye wɔ adesamma abakɔsɛm mu bere a emu yɛ den yi mu. Sɛnea ɛfata no, ɛne nhoma a wɔakyekyɛ pii wɔ asase so sen biara.—Hwɛ 2 Petro 1:20, 21; 3:11-14; 2 Timoteo 3:1-5, 14-17.
8. Edin bɛn na Bible no de frɛ okyinnsoromma a ɛne Asase yi no Bɔfo?
8 Bible no nkyekyem a edi kan no ka nokwasɛm titiriw yi ho asɛm sɛ “Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase.” (Genesis 1:1) * Ɛwom sɛ nnipa binom mpɛ sɛ wɔbɔ Onyankopɔn din de, nanso Bible no nyɛ saa. Genesis 2:4 da Ɔbɔadeɛ no din adi na ɛka kyerɛ yɛn sɛ “Awurade [Yehowa, NW] Nyankopɔn yɛɛ asase ne soro.” (Hwɛ Genesis 14:22; Exodus 6:3; 20:11 nso.) Wɔkyerɛw Bible no fã kɛse no ara wɔ Hebri kasa mu, na Onyankopɔn ankasa din no pue bɛyɛ mpɛn 7,000 sɛ tetragrammaton kronkron (יהוה) wɔ Bible no fã a wɔde Hebri kasa kyerɛwee no mu. Nsɛm asekyerɛfo bi kyerɛ ase sɛ Yahwe, nanso Twi kasa mu de a pii de di dwuma ne Yehowa.
9. (a) Hena na ɔtoo Onyankopɔn saa din no? (b) Onyankopɔn din no ho hia yɛn dɛn? (Yoel 2:32; Mika 4:5)
9 Ɛnyɛ adesamma bi a wɔpɛ nyamesom na wɔbɔɔ wɔn tirim paw edin yi. Ɔbɔadeɛ no ankasa na ɔpawee. (Exodus 3:13-15; Yesaia 42:8) Ɛnyɛ edin a wobetumi de Buddha, Brahma, Allah anaa Yesu asi ananmu de adi dwuma. Ɔkwan a ɛfata so no, odiyifo Mose kaee tete Israel man no sɛ: “Wo ankasa wuhu nnɛ, na fa sie wo koma mu, sɛ Yehowa [Hebri: יהוה] ne Nyankopɔn wɔ soro, ne asase so wɔ fam. Obi foforo biara nni hɔ bio.” (Deuteronomium 4:39, NW) Oyi ne Nyankopɔn a Yesu Kristo bɔɔ no mpae, Nea ɔkaa ne ho asɛm sɛ “nokware Nyankopɔn koro no.” Ɛnnɛ, nnipa a wɔasua ade a wofi asase so ɔman biara mu no som No.—Yohane 17:3; Mateo 4:8-10; 26:39; Romafo 3:29.
10. Dɛn nti na nuklea akodi ho asiane ne ɔsɛe a efi̇̃ de ba no rensɛe Onyankopɔn atirimpɔw ma asase no?
10 Esiane nokwasɛm a ɛne sɛ Yehowa ne asase Bɔfo nti, okyinnsoromma no nyinaa yɛ ne de, na ne daakye wɔ ne nsam. (Deuteronomium 10:14; Dwom 89:11) Adesamma haw ahorow no nyɛ nea Onyankopɔn ntumi nni ho dwuma. Nuklea akodi a nnipa hwɛ kwan sɛ ɛbɛba no ma wɔbɔ hu. Nanso hena mmara na edi tumi wɔ nuklea dwumadi akɛse a ɛkɔ so wɔ nsoromma ɔpepepem pii a wontumi nkan no mu? Onyankopɔn nni nimdeɛ ne tumi a ehia na ɔde abɔ nkwa ho ban wɔ okyinnsoromma a ɛne Asase yi so no? Saara na nsɛnnennen a asɔre esiane sɛ nnipa de anibiannaso ne adifudepɛ asɛe nneɛma a atwa wɔn ho ahyia nti no rensiw Ade Nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn no atirimpɔw kwan. Nea ɔwɔ nyansa ne tumi a na ehia na ɔde abɔ asase ne ɛso nkwa a ɛyɛ nwonwa no betumi asiesie so ama no mfiase foforo, sɛ ɔpɛ a. (Yesaia 40:26; Dwom 104:24) Ɛnde, dɛn ne Yehowa atirimpɔw ma yɛn okyinnsoromma fie yi?
ASASE NO BƐTRA HƆ AKOSI BERE BƐN?
11. (a) Nyansahufo binom gye di sɛ dɛn na ɛbɛba asase no so? (b) Hena na onim nneɛma a ɛtete saa ho nsɛm pii sen wɔn, na dɛn ntia?
11 Onyankopɔn atirimpɔw ne sɛ ɔbɛsɛe asase ne emu nneɛma a nkwa wom nyinaa? Nsoromma ho animdefo bɔ wɔn tirim ka sɛ awiei koraa no, yɛn owia yi bɛpae ayɛ kɛse na ahyew asase no. Ebinom wɔ hɔ a wɔka sɛ esiane sɛnea amansan no te nti, bere bi bɛba a owia no renhyerɛn bio na nneɛma a nkwa wom rentumi ntra asase so bio. Nanso nea wɔka no yɛ nokware? Dɛn na Ɔbɔadeɛ no ka—Nea ɔmaa tumi ne nneɛma bae, Nea ɔhyehyɛɛ mmara ahorow a yɛn nkwa gyina so no?—Hiob 38:1-6, 21; Dwom 146:3-6.
12. Ɔkwan bɛn so na nsɛm a ɛwɔ Ɔsɛnkafo 1:4 no ayɛ nokware?
12 Yehowa honhom kaa Ɔhene Salomo onyansafo no ma ɔkyerɛw sɛnea wɔde onipa nkwa tenten atoto bere tenten a asase no de bɛtra hɔ no ho asɛm. Salomo kyerɛw nsɛm yi wɔ Ɔsɛnkafo 1:4, NW, sɛ: “Awo ntoatoaso kɔ na awo ntoatoaso ba; nanso asase de, etim hɔ kosi daa.” Adesamma abakɔsɛm kyerɛ sɛ eyi yɛ nokware. Ɛwom sɛ adesamma awo ntoatoaso biako akɔ so asi foforo ananmu de, nanso asase a yɛte so no akɔ so atim hɔ. Nanso ɛbɛyɛ saa akosi bere bɛn? Sɛnea wɔakyerɛ ase tee wɔ New World Translation of the Holy Scriptures no mu no, ɛbɛtra hɔ akosi “daa.” Eyi kyerɛ dɛn?
13. (a) Dɛn na “daa nyinaa” betumi akyerɛ? (b) Ɛnde, yɛbɛyɛ dɛn atumi ahu no yiye sɛ asase no bɛtra hɔ akosi daa?
13 Nea Hebri asɛmfua ‘oh·lamʹ, a wɔakyerɛ ase wɔ ha sɛ “daa,” no kyerɛ ankasa ne bere bi a mprempren wonnim n’awiei, ɛwɔ hɔ bere nyinaa anaasɛ wontumi nhu nanso ɛbɛkyɛ yiye. Ɛno betumi akyerɛ daadaa. So saa na ɛkyerɛ wɔ asɛm yi mu? Anaasɛ asɛm yi kyerɛ sɛ ebia wɔ daakye bere bi a yennim n’awiei, a seesei ahintaw yɛn mu no, asase no bɛba n’awiei? Nneɛma bi a Bible no kae sɛ ɛbɛtra hɔ “daa” no baa awiei. (Fa toto Numeri 25:13; Hebrifo 7:12 ho.) Nanso Kyerɛwnsɛm no de ‘oh·lamʹ ka ade a ɛbɛtra hɔ daa—sɛ nhwɛso no, Ɔbɔadeɛ no ankasa, nso ho asɛm. (Fa toto Dwom 90:2 ne 1 Timoteo 1:17 ho.) Ɛdefa asase ho no, wɔma yehu nea asɛm no kyerɛ pefee. Wɔka kyerɛ yɛn wɔ Dwom 104:5, NW, sɛ: “Ɔde asase atim ne nnyinaso so; ɔremma enhinhim da biara da, anaa daapem.” *—Hwɛ Dwom 119:90 nso.
14. Yɛyɛ dɛn hu sɛ asase rennan asase kesee bere bi?
14 Nea ɛbɛtra hɔ akosi daapem no nyɛ asase bi a hwee nni so na entumi nsow aba. Wɔka kyerɛ yɛn wɔ Yeremia 10:10-12, NW, sɛ: “Nokwarem no, Yehowa ne Nyankopɔn. . . . Ɔno na ɔde ne tumi yɛɛ asase, de Ne nyansa maa asase a ɛsow aba no tim hɔ pintinn, na Ɔde ne nhumu trɛw ɔsoro mu.” Hyɛ no nsow sɛ ɛnyɛ sɛ ɔyɛɛ “asase” nko, na mmom ɔde “asase a ɛsow aba no” tim hɔ pintinn. Nsɛm asekyerɛfo pii kyerɛ Hebri asɛmfua te·velʹ ase tiawa sɛ “wiase” de hyɛ nsɛm a edi akyiri yi ananmu. Nanso, sɛnea Old Testament World Studies a William Wilson yɛe no kyerɛ no, te·velʹ kyerɛ “asase, nea ɛsow aba na nnipa te so, asase a wotumi tra so, wiase.” Ɛdefa Yehowa atirimpɔw wɔ asase a ɛsow aba na nnipa te so yi ho no, Dwom 96:10, NW, ka no awerɛhyem so sɛ: “Yehowa ankasa adi hene. Asase a ɛsow aba no nso atim hɔ tim pa na anhinhim da.”—Hwɛ Yesaia 45:18 nso.
15. Ɔkwan bɛn so na nokwasɛm ahorow yi ne mpaebɔ a Yesu kyerɛɛ n’akyidifo no hyia?
15 Enti, okyinnsoromma a ɛne Asase a yɛte so yi na Yesu Kristo kyerɛɛ n’asuafo no sɛ wɔmmɔ Onyankopɔn mpae wɔ ho sɛ: “W’ahenni mmra. Nea wopɛ nyɛ asase so, sɛnea ɛyɛ ɔsoro.”—Mateo 6:9, 10, Yɛn na yɛasi ɔfã bi so dua no.
16. (a) Nnipa bɛn na wɔbɛtra asase so? (b) Dɛn ne “asase foforo” a Bible no ka ho asɛm no?
16 Ɛnyɛ Yehowa pɛ ne sɛ nnipa a wonni obu biara ma asase no Wura, na wonni dɔ ma wɔn ho wɔn ho ahe biara na wɔbɛtra asase no so. Bere tenten a atwam ni no, ɔhyɛɛ bɔ sɛ: “Na wobeyi nnebɔneyɛfo hɔ, na wɔn a wɔtwɛn Awurade no, wɔn na wobenya asase no adi. Treneefo benya asase no adi, na wɔatra so daapem.” (Dwom 37:9, 29) Nnipa a wosuro Onyankopɔn na wofi komam dɔ wɔn yɔnko nnipa na wɔbɛtra “asase a ɛreba” a Bible ka ho asɛm no so. (Hebrifo 2:5, NW; fa toto Luka 10:25-28 ho.) Nsakrae ahorow a Onyankopɔn soro Ahenni no de bɛba no bɛyɛ akɛse araa ma Bible no ka “asase foforo” ho asɛm—ɛnyɛ asase soronko bi, na mmom adesamma abusua foforo a wɔbɛtra paradise tebea horow a adesamma Bɔfo no bɔɔ ne tirim sɛ ɔde bɛba bere a ofii n’asase so adebɔ ase no mu.—Adiyisɛm 21:1-5; Genesis 2:7-9, 15.
17. Dɛn nti na ɛho hia sɛ yesua Onyankopɔn ahwehwɛde ahorow ma nkwagye no mprempren?
17 Ɛsɛ sɛ ɔsɛe kɛse bi—nea ɛsen biribiara a adesamma ahu pɛn—di “asase foforo” a wɔde besi hɔ no anim ba. Asase no ankasa ne wɔn a wɔde aseda ma ne Bɔfo no nokwarem nso yiyedi nti, ‘ɔbɛsɛe wɔn a wɔsɛe asase no.’ (Adiyisɛm 11:17, 18) Bere a Onyankopɔn de bɛyɛ eyi no abɛn yiye! Sɛ owie a, so wobɛka wɔn a wobefi mu anya nkwa no ho?—1 Yohane 2:17; Mmebusɛm 2:21, 22.
^ nky. 7 Hwɛ nhoma Is the Bible Really the Word of God? a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. yɛe no mu.
^ nky. 8 Bible kyerɛw nsɛm a wɔafa aka asɛm wɔ nhoma yi mu nyinaa fi Twi Bible Foforo no mu, gye sɛ wɔkyerɛ sɛ efi baabi foforo.
^ nky. 13 Enti, nsɛm asekyerɛfo binom te sɛnea wɔde ‘oh·lamʹ adi dwuma wɔ Ɔsɛnkafo 1:4 no ase sɛ ɛkyerɛ “daapem.” The New English Bible, Revised Standard Version, The Jerusalem Bible, The Bible in Living English, King James Version ne afoforo kyerɛ ase saa kwan yi so.
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 5]
Share Share Dɛn na Ɛbɛba Okyinnsoromma a Ɛne Asase So?
su ti 1 kr. 4-12